Road to Freedom: နွေဦးကြို တေးသံ
Posted by Nyein Chan Aung at 4:27:00 PM
လက်ရုံးရည် တစ်ခုကို အားကိုး
နှလုံးရည် တစ်ခုကို အားကိုး
အမြီးကျက်အမြီးစား ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ကဗျာလေး အရမ်းထိတယ် ဗျာ။
rJapmuf eJh csif;rdkifrSmawGhcJh cifrifcJh&wJh rsufESmav;awGudk jrifa,muf+yD; oufjyif;awGtcgcgcsrdw,f? igwdkhEdkifiH 'DppfbD;vl;awGatmufu rvGwfajrmufoa&G@ nDrav;wdk@b0av;awG tEWm&m,fxlajymwJh 'Dvrf;c&D;rSm ab;uif;Edkifygapvdkhqkawmif; ,HkuvGJ+yD;…
Ko NCA, could you please convert this to Burmese font? my com won't let me type in burmese font. thank you.
မင်း ခူးဆွတ်ဖို့ စောင့်ရစ်တော့ ကောင်မလေးရေ……………။
ကဗျာလေးကမိုက်တယ်..ကောင်းတယ်..ကို nca ရေ..ဆက်ရေး ဆက်ရေး ။
မဲဆောက်နဲ့ ချင်းမိုင်မှာ တွေ့ခဲ့ ခင်မင်ခဲ့တဲ့ မျက်နှာလေးတွေကို မြင်ယောင်ပြီး သက်ပြင်းတွေအခါခါ ချမိတယ်။ ငါတို့ နိုင်ငံ ဒီစစ်ဘီလူးတွေအောက်က မလွတ်မြောက်သရွေ့ ညီမလေးတို့ ဘ၀လေးတွေ အန္တရာယ်ထူပြောတဲ့ ဒီလမ်းခရီးမှာ ဘေးကင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းယုံကလွဲပြီး…
ကောင်းတယ်ဗျာ စက်ရုံတွေ ရွေတွေများများရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ဒီကဗျာကို လိုက်ဖြန့်သင့်တယ် တကယ်ထပြီး ကောင်မလေးတွေအပေါ် တကယ်ပဲ အကျိုးသက်ရောက်မှု့ရှိမှာပါ. ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ဒီကဗျာကို ဖြန့်ပါမယ်.ကိုယ့်မိန်းကလေးတွေအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့..
နွေဦးကြိုကဗျာကို ဘယ်လိုနှလုံးသား၊ ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးနဲ့ရေးလိုက်တာလဲဗျား။ ကျနော်လည်းအဲဒီလိုမျိုးခံစားခဲ့ဘူးလို့ ခံစားခြင်းတူတယ်ဗျာ။ မြ၀တီမှာ နေပြီး မဲဆောက်ဆိုတာကို မုန်းသွားတဲ့အထိပါပဲ၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။